ITrovaWeb: i-2019% Messinese Innovative StartUp yazalwa ngonyaka ka-100
Kwenziwe ngokusemthethweni kwi 29 January 2019 Isisekelo se I-TrovaWeb Srl - The I-StartUp 100% Messinese
Umhlaba we I-Innovative StartUp, kusukela ngomhlaka 29 kuJanawari 2019, kukhona iqiniso elishaqisayo elithembisayo elivela I-Messina.
I-StartUp ye-Innovative ngqo kusuka kuMessina: izindaba ezikugcwalisa ngokwaneliseka
Intelligence yokufakelwa e SEO: Lesi isilinganiselo sika Ukucinga lapho izosebenza khona kusukela ngonyaka ka-2019 I-TrovaWeb, I-Italian Innovative StartUp kubhaliswe ku-Ukubhaliswa Kwezwe ngamaphrojekthi we Ucwaningo nentuthuko emkhakheni weUkusebenziseka kwekhasi le-web Amasu Athuthukile we SEO ngokusebenzisa Intelligence yokufakelwa.
Akuyona into entsha eSilicon Valley. Kumayelana ne Inkampani eyi-100% yaseSisilia futhi ngokuqondile Messina. È Eqinisweni da Messina lokho kuza izindaba zesisekelo se I-TrovaWeb, Iqiniso selivele laziwa iminyaka eminingana ku-panorama hhayi iSicily kuphela, kodwa kuzwelonke, kumaphrojekthi amaningi aphumelelayo ngaphakathi Ukuxhumana Kwedijithali, Ukukhangisa Amasu Obuchwepheshe SEO.
Manje, ngemuva kwesikhathi eside sokumaketha esisebenza ukuvivinya ubuhle bephrojekthi nokwenza zonke izici zayo, u-2019 umaka ukwehla kwezinga.
Ubuhlakani Bokuhlobisa Nezindlela Zokuthuthuka ze-SEO Zokusebenzisa kahle amakhasi eWebhu
Yaziwa kwi ivelu enhle kakhulu womqondo ngemuva kwenkampani, i-Umqondisi weSolezwe UCaterina Doddis ithole ukukhanya okuluhlaza ukubhaliswa ku-National Rejista ngabakwa Mise. Futhi, ngakho-ke, iphupho elicishe libe ngamashumi amabili lenkampani enobuchwepheshe obukhulu, ikwazile ukwenza umzimba 29 January 2019. Le nkampani izosebenzisa ithuba lokubonisana kanye neminyaka engamashumi amabili yolwazi Iphromoshini ye-J & M 2000, umholi emkhakheni we Ukuxhumana kwedijithali futhi we Ukukhangisa kwewebhu.
Ngakho-ke, ukusebenzisa amakhono aphezulu emkhakheni we SEO, della Ukukhangisa futhi we Ukuxhumana kwewebhu yezinkampani nabachwepheshe, ingane yentombazane I-Innovative StartUp I-TrovaWeb I-SRL isivele iqala ngengcebo eningi yamakhono, ulwazi namakhono athuthukile. Isikhwama esizothuthukisa ukubonga ekusebenzeni kweIntelligence yokufakelwa ukuthuthukisa amasu we Ukusebenza kahle Amakhasi e-Web anamasu athuthukile Lokho.
È ukuze iphupho elalihlelelwe isikhathi eside lazalwa, lakhulelwa futhi laqedwa ngayo yonke imininingwane. L'inani eliphakeme lobuchwepheshe yenkampani ngokuqinisekile ingamandla amakhulu kakhulu futhi ithembisa ukudala iqiniso elihleleke kahle kakhulu elikwazi ukudala izindinganiso ezintsha ze-SEO kanye namasu amasha ezobuchwepheshe okufanele abekwe lapho kusetshenzelwa izinkampani, ochwepheshe hhayi kuphela. Iqiniso lokuthi inkampani yalesi sigaba yazalelwa kuyo Messina kungesinye isizathu sokuqhosha nokwaneliseka. Kuqala kusuka Messina inguquko yangempela. Igama lakhe ngu I-TrovaWeb futhi isivele ikusebenzela.
Tags: ubuhlakani bokufakelwa ukuqala okuhle mishini yokuqalisa entsha
Categories: Qalisa, Izindaba
Ubeka amazwana njengesimenywa.